Idlalwa njani iChords kwi-C Family kwiGuitar
Abanye abantu bathi i-C yeyona ndlela ilula yokudlala ikatala. Kungenxa yokuba i-C iluhlobo lwesikwere somculo-inqaku apho yonke into (kwaye, ngesiqhelo, wonke umntu) iqala emculweni. Ngenxa yokuba kulula kakhulu, inezikhetho ezininzi kusapho lwayo-zininzi kakhulu ukuba zingaziqonda zonke ngaxeshanye. Mamela iDust in the Wind, yiKansas okanye iThe Boxer, nguSimon noGarfunkel ukuva isandi sengoma esebenzisa ii-ch-family chords.
Iimpawu eziphambili ezenza usapho lwe-C zi-C, Dm, Em, F, G, kunye no-Am. Ukuba ufunda i-A-, D- kunye ne-G-chord chord kuqala, uyakufumanisa ukuba sele ufundile uninzi lwezinto zokucofa i-C (C, Em, G, kunye no-Am). Okwangoku, kuyakufuneka kuphela ukuba uthathe ezinye iindlela ezimbini: Dm no-F.
ungathatha i-tylenol kunye ne-azithromycin
Makhe sijonge kumanqanaba amatsha kusapho lakwa-C. Qaphela ukuba zombini i-Dm kunye ne-F chords zinomnwe wesibini kumtya wesithathu, ukhathazeka okwesibini. Gcina le toni iqhelekileyo ezantsi njengoko uswitsha phakathi kwezi zimbini zikhetho.
I-Dm kunye ne-F chords. Qaphela i-arc kumzobo we-F-chord ekuxelela ukuba ukhathazeke (okanye uthabathe) imitya emibini ngomnwe omnye.
Ukuya kwiminwe, sebenzisa ibhola yomnwe wakho, uyibeke emva komkhukula (kwicala elibheke kwiikhonkwane zokulungisa). Gweba iminwe yakho ukuze iincam zeminwe ziwele ngokungafaniyo nentamo. Qinisekisa ukuba iinzipho zakho zasekhohlo zifutshane ukuze zingakuthinteli ekucinezeleni imitya yonke indlela ezantsi kwibhodi yeminwe.
Abantu abaninzi bafumana i-chord F eyona nto inzima ukuyidlala. Kungenxa yokuba u-F akasebenzisi zintambo zivulekileyo, kwaye ikwafuna barre (ucinezela ngaphezulu komtya omnye ngomnwe omnye). Ukudlala i-chord F, umzekelo, usebenzisa umnwe wakho wokuqala ukucinezela zombini umtya wokuqala kunye nowesi-2 kwi-fret yokuqala ngaxeshanye.
UKUYA ivaliwe yinto oyidlalayo naninina xa ucofa umtya omnye okanye nangaphezulu ngaxeshanye ngomnwe wesandla sasekhohlo. Kuya kufuneka usebenzise uxinzelelo lomnwe olongezelelweyo ukuze udlale ibarre. Ekuqaleni, unokufumanisa ukuba, njengoko usonga umtya, uva ezinye ii-buzz okanye imitya engadityaniswanga. Zama ngeendlela ezahlukeneyo zokubekwa komnwe wakho wesalathiso. Zama ukulungelelanisa i-engile yomnwe wakho okanye uzame ukujikeleza umnwe wakho kancinci kwicala lawo. Qhubeka uzama ude ufumane indawo yomnwe wokuqala owenza ukuba zonke imitya emine ikhale ngokucacileyo njengoko ubabetha.
Inombolo elandelayo ibonisa ukuqhubela phambili kwe-chord elula ongayidlala ngokusebenzisa ii-C-family chords. Dlala inkqubela phambili iphindaphindwe ukuze uqhelane nokutshintsha phakathi kweentsingiselo kule ntsapho kwaye, ewe, ukunceda ukwakha ezo fowuni zincinci zincinci.
Qaphela umgca omncinci ogobileyo ojoyine isiqingatha sesibini sokubetha u-2 ukubetha u-3. Lo mgca waziwa njenge tie. A iqhina ikuxelela ukuba ungabethi inqaku lesibini lamanqaku amabini abotshiweyo (kule meko, enye ibethwe kwi-3). Endaweni yoko, qhubeka ubambe i-chord kuloo ukubetha (ukuyivumela ukuba ikhale) ngaphandle kokuyibetha kwakhona ngesandla sakho sasekunene.
Iphethini yokulinganisa kulo mzobo yimpembelelo encinci yesingqisho ebizwa ngokuba ungqamaniso . Kwi-syncopation, imvumi ingabetha inqaku (okanye i-chord) apho ungalindelanga ukuyiva okanye isilele ukubetha inqaku (okanye i-chord) apho ulindele ukuyiva khona. Ukuvumelanisa kuqhekeza ipateni yesiqhelo yeebethi kwaye kubonise into eyothusayo kumculo. Ukulingana phakathi kokulindela kunye nokumangaliswa kumculo yinto ebambe umdla wabaphulaphuli.
Ngokuqinisekileyo uhlala ulindele ukubetha amanqaku kwiibethi (1, 2, 3, 4). Uya kuqaphela ukuba awubethi chord xa ubetha u-3.Uko kwahlukahlukana kwipateni yokubetha kwenza i-chord ekubetheni u-2 1/2 uziva ngathi kugxilwe (okanye, njengoko iimvumi zisitsho, isandi ). Olu nyanzeliso luphazamisa ukubetha komculo (okulindelweyo) komculo, kukhokelela kulungelelwaniso lomculo.
ndingathatha i-prednisone ebusuku
Ukudlala ingoma esebenzisa i-C-family chords ngoku, zama isandla sakho kuMichael, Row the Boat Ashore.
iyeza elitsha le-ms
amayeza okuphepha nge-ehlers danlos syndrome
ipilisi emhlophe ene e